Ny Bahamas dia mandray fitsangatsanganana vaovao Crystal Cruises manomboka amin'ity fararano ity
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Bahamas » Ny Bahamas dia mandray fitsangatsanganana vaovao Crystal Cruises manomboka amin'ity fararano ity
Vaovao Mafana Bahamas • Vaovao Mafana • Karaiba • Cruising • Hospitality Industry • Vaovao • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Vaovao isan-karazany
Faly ny Minisiteran'ny Fizahan-tany sy ny sidina Bahamas hanampy 3 fitsangatsanganana an-dranomasina vaovao Crystal ho an'ny zotram-piaramanidina mitombo manomboka amin'ity fararano ity ary amin'ny vanin-taona ririnina. Crystal Cruises dia nanambara ny andiany sambo vaovao hitaona ny Crystal Symphony, rehefa manakaiky ny vanim-potoana mangatsiaka kokoa.
Ny fitsangatsanganana an-tsambo fitsangantsanganana mandritra ny vanim-potoana maro dia fitsangatsanganana an-tampon'ny 7 alina antsoina hoe Bound for Paradise.
Hanomboka avy any New York City mankany Nassau ny dia amin'ny 6 Novambra 2021, miaraka amin'ireo seranan-tsambo miantso ao San Salvador, Great Exuma, ary Bimini.
Ny manaraka amin'ny Taom-baovao dia fankalazana tropikaly manomboka amin'ny 2021 manomboka ny New York City ary mifarana amin'ny 2022 ao The Bahamas.
"Faly izahay fa mitaky hatrany ny fitakiana fitsangantsanganana any Bahamas ary manantena ny handray ireo mpandeha amin'ity fararano ity," hoy ny Hon. Dionisio D'Aguilar, minisitry ny fizahan-tany sy fiaramanidina Bahamas. "Ny Crystal Cruises dia voaporofo fa fiaraha-miasa mahavokatra tsy ho an'ny indostrian'ny fitsangantsanganana ataon'ny Bahamas ihany, fa koa ho an'ny indostrian'ny fizahan-tany eo an-toerana satria mamela ny mpandeha hiala ny sambo sy hijery ny orinasa, ny mpizahatany ary ny hetsika manerana ny Nosy Family."
Ny Bahamas dia hanomboka ireo fanampiana fanampiny mandritra ny vanim-potoana maro, voalohany amin'ny dia mandritra ny 7 alina, Bound for Paradise, manomboka ny 26 Novambra 2021, avy any New York City ka hatrany Nassau, miantso an'i San Salvador, Great Exuma ary Bimini.
Ireo sambo mpitsangatsangana dia afaka manomboka ny taom-baovao any Bahamas amin'ny 29 Desambra 2021, amin'ny alàlan'ny dia an-tsambo fankalazana ny Taom-baovao Tropika, izay misy fitsangantsanganana 10 alina avy any Miami, Florida mankany Bimini, San Salvador, Long Island ary Great Exuma, miaraka amina fijanonana farany amin'ireo rahalahintsika sy mpiray tampo amin'i Karaiba any Jamaika.
Ny dia an-tsambo Blissful Bahamian Luxury dia hanana fiaingana maro manomboka ny 22 Janoary 2022, avy any Miami, ao anatin'izany ny fijanonana ao Bimini, Nassau, San Salvador, Great Exuma ary Long Island. Hanana sambo roa fanampiny ity andiany ity amin'ny 12, 2022 ary 5 martsa 2022.
Crystal Cruises dia nanova ny fomba fitsangantsanganan'ny mpandehandeha any The Bahamas, ahafahan'ny mpandeha mandeha hijery ny zava-mahatalanjona ao amin'ny Nosy Nosy any ankoatry ny rano mahafinaritra, ao anatin'izany ny fiainana dia, ny mariky ny tantara, ny UNESCO World Heritage Site, ny fiantsenana sy ny fisakafoanana eo an-toerana.
Raha mila fanazavana fanampiny momba ny fandefasana Crystal Symphony ho avy, tsidiho azafady www.fjkm-from.com
Miaraka amin'ny nosy sy cay maherin'ny 700 ary toerana itodiana 16 tsy manam-paharoa, ny Bahamas dia any amin'ny 50 kilaometatra miala ny morontsirak'i Florida ihany no manome sidina mora, izay mitatitra mpandeha lavitra ny andavan'andro. Ny nosy Bahamas dia manana jono, antsitrika, sambo ary kilasy an'arivony maro amin'ny rano sy torapasika mahatalanjona indrindra eto an-tany. Ny Bahamas dia fantatra fa manana rano madio indrindra eto an-tany. Mazava be fa nizara sary am-polony amin'ireo nosy ireo astronaut NASA, Scott Kelly, raha nitety ny tany tamin'ny taona 2015. Nisioka izy fa The Bahamas no “toerana tsara indrindra avy eny amin'ny habakabaka.” Jereo ireo nosy rehetra atolotra ao www.bahamas.com na ao amin'ny Facebook, YouTube or Instagram hahitanao hoe maninona no Tsara kokoa any The Bahamas.